10-ka Qandaraasle ee ugu mushaarka badan | Gobolka ugu Fiican | Shaqooyinka Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn 10 Qandaraaslayaasha Ugu Mushaarka Badan Gobolka ugu Fiican
Shaqooyinka qandaraasyadu hadda waa maalinta kale ee macnaha ah in ardayda qalin-jabisa ay hadda door bidaan inay si madaxbannaan u shaqeeyaan halkii ay shaqo ka heli lahaayeen, oo ay sii joogaan shaqadaas ilaa hawlgabku ay ahayd heerka dhawaanahan.
Si kastaba ha noqotee, marka loo wareego dhaqaalaha cusub ee baahida loo qabo, ikhtiyaar kale ayaa ah inaad ku qalinjabiso karti gaar ah, ka hesho shaqo qandaraas warshadaada, ka dibna aad ka guurto qandaraas ilaa kan xiga, adigoo helaya khibrad shaqo oo faa'iido leh inta lagu jiro wadada.
Qaabkan cusub ee ku shaqaynta qandaraasle madaxbannaan wuxuu caddeeyay inuu yahay waayo-aragnimo aad u wanaagsan oo abaal-marinaysa dadka qaarkood, oo leh abaal-marinno aad uga badan marka loo eego boos-buuxa oo buuxa.
Ahaanshaha qandaraasle waa u qalantaa gaar ahaan marka dheeftiisu ka badan tahay khasaaraha.
Inta lagu guda jiro magdhowga, maqaalkani wuxuu dabooli doonaa 10 Qandaraasleyaasha ugu mushaharka badan iyo Dawladaha ugu Fiican ee xirfaddan.
Faa'iidooyinka Ahaanshaha Qandaraasle
Aynu eegno qaar ka mid ah faa'iidooyinka qandaraaslaha ah.
Waxaad ku baran kartaa xirfado kala duwan waqti gaaban gudaheed.
To u magdhabo faa'iidooyin la'aanta, waxaad samaynaysaa lacag badan.
Qandaraasle ahaan, waxaa lagugu magdhabayaa sicirka suuqa saacad kasta oo shaqo ah oo aad dhammayso.
Shaqaalaynta qandaraasku waxay kuu oggolaan kartaa inaad ku shaqayso jadwal ka dabacsan.
Si loo magdhabo faa'iidooyin la'aanta, waxaad samaynaysaa lacag badan.
Xaaladaha badankood, habka wareysiga ayaa si aad ah uga dhaqso badan habka shaqaalaynta boos joogto ah.
Shaqaynta shaqooyin badan oo qandaraas ayaa kuu oggolaan doona inaad ballaariso shabakaddaada xirfadeed.
Waxaad ka shaqayn kartaa shaqooyin kala duwan ilaa aad ka hesho mid ku habboon danahaaga shaqo.
Dhanka kale, noqoshada qandaraasle waa mid soo jiidasho leh, laakiin waxaa habboon in sidoo kale la aqoonsado qaar ka mid ah cilladaha ka shaqeynta qandaraasle ahaan.
Qasaarooyinka in uu noqdo qandaraasle
Iyadoo ku xiran doorka, waxaa jiri kara la'aan ammaanka shaqada.
Waxaad bixin doontaa kharashka tababarkaaga iyo horumarinta awoodaha cusub.
Xaq uma yeelan doontid isla mushaharka jirrada iyo fasaxa ee shaqaalaha joogtada ah.
Ka dib marka uu qandaraasku dhaco, waa inaad raadsataa shaqo cusub. Waxaa laga yaabaa in lagaa filayo inaad haysato qalooca waxbarashada oo aad u gaaban booska.
Marka la barbardhigo booska joogtada ah, waxay u badan tahay inaad yeelan doonto faa'iidooyin yar.
In kasta oo faa'iidooyinka maaliyadeed ee qandaraasku ay yihiin kuwo soo jiidasho leh, haddana waxaa jira arrimo kale oo u muuqda kuwo soo jiidasho leh, sida dabacsanaanta muuqata iyo xorriyadda aad ku dooran karto saacadahaaga, ka shaqayso meel kasta oo aad rabto, iskana ilaali inaad ku koobnaato hal kursi xafiis.
Si kastaba ha ahaatee, arrimuhu had iyo jeer ma aha kuwo toos ah sida ay u muuqdaan. Waa inaad tixgelisaa qaar ka mid ah qasaarooyinka qandaraaska.
Waxaa intaa dheer, nolosha qofka shaqaalaha ah lama barbar dhigi karo nolosha qandaraaslaha. Markaad eegto inta qandaraaslayaal sameeyaan marka la barbar dhigo shaqaalaha, mid ayaa jeclaan lahaa inuu noqdo qandaraasle.
Maamulayaasha dhismaha (oo ay ku jiraan qandaraaslayaasha guud) waxay sameeyaan celcelis ahaan $ 43.93 saacaddii ama $ 91,370 sanadkii.
Sidee qandaraaslayaashu lacagtooda u sameeyaan?
Si loo go'aamiyo inta qandaraaslayaashu sameeyaan waxay ku xiran tahay arrimo ay ka mid yihiin:
Tayada iyo kala duwanaanta adeegga.
Qandaraasluhu waxa uu faa'iido ka samayn karaa labadaba shaqada iyo alaabta uu iibiyahu bixiyo.
Teeda kale, qandaraasluhu waxa uu faa'iido ka heli karaa shaqada iyo alaabooyinka ay dhigaan shaqaalihiisa marka ay diyaarinayaan mashruuca meel ka baxsan oo lagu rakibayo waxa la dhisayo.
Qandaraaslayaashu waxay ka macaashaan kor u qaadista qiimaha iibka. Tani maahan inay ku koobnaato kordhinta qiimaha badeecadooda. Kordhinta qiimaha wax iibinta ayaa sidoo kale lagu samayn karaa iyadoo la kordhiyo qiimaha iibka oo ay ku jirto.
Marka ay calaamadeeyaan wax kasta oo ay iibiyaan. Marka ay ogaadaan rajada saxda ah oo ay ka iibiyaan alaab qiimo sare leh marka loo eego kuwii hore, celceliska qiimaha iibka ayaa kor u kacaya iyo faa'iidadooda guud ee hawl kasta ayaa sidoo kale kor u kacda, dhammaantood iyada oo aan lagu darin shaqo dheeraad ah ama maalmo dheeraad ah jadwalka mashruuca.
Maxay Qandaraaslayaashu Lacag Badan u Siiyaan?
Waa fikrad guud oo ku saabsan shaqaalaha dhismaha in, imisa ayay sameeyaan shaqaalaha dhismaha?
Qandaraaslayaasha waxaa la siiyaa magdhow ka badan kan shaqaalaha.
Tani waa sababta oo ah qandaraasleyaashu waxay qaadaan wax ka badan waxayna hayn karaan qayb ka badan magdhowga marka loo eego shaqaalaha.
Shirkado badan ayaa ku bixinaya jagooyin qandaraas suuq adag si ay u kobciyaan faa'iidooyinka iyo kharashyada kale ee la xiriira shaqaalaynta waqtiga buuxa ah.
Si kastaba ha ahaatee, sababta oo ah waxay kharash yar ku bixiyaan meelaha kale, waxay aad ugu diyaarsan yihiin inay bixiyaan qiimayaal saacad ka badan, taasoo keentay mushahar qandaraasle sare.
Sidoo kale, qandaraaslayaashu waxay helaan mushahar badan sababtoo ah qandaraasleyaashu waxay qaadaan culayska isla xisaabtanka iyo halista.
XIDHIIDHKA: 25 Shaqooyinka & Barnaamijyada Dhaqaalaha Gig ee ugu Fiican 2022 | Hagaha Bilowga
Qandaraaslayaasha shaqaaleysiinta, shirkadu waxay u wareejin kartaa khatarta iyo waajibaadka urur kale ama qof kale (oo leh qandaraasle madaxbannaan).
Qandaraaslaha waxaa loo shaqaaleysiin doonaa si uu u qabto hawlo gaar ah, sida buuxinta jagooyinka u baahan ilo badan (qorayaal, maamulayaal, iyo wixii la mid ah); kheyraadkan inta badan ma helaan hay'adaha.
Guud ahaan, shaqada qandaraasku ma bixiso faa'iidooyin la mid ah ka shaqaynta shaqaalaha caadiga ah ee shirkad. Faa'iidooyinka la'aanta awgeed, inta badan waxaa lagu siinayaa wax ka badan qandaraaska.
Waa imisa Qandaraaslayaashu?
Suurtagal maaha in lagu heshiiyo inta qandaraasleyaasha ah ee soo gala miisaan ballaaran. Tan waxaa u sabab ah dhowr arrimood.
Qiimaha qandaraaslaha waxaa go'aamiya hawsha qandaraaslaha, iyo sidoo kale xirfaddooda iyo khibradooda. Waxa kale oo jira dhinac juquraafi ahaan.
Qandaraaslayaal ka shaqeeya London, tusaale ahaan, waxay caadi ahaan kasban doonaan wax ka badan qandaraaslayaal ka shaqeeya meelo kale oo UK ah, iyadoon loo eegin waaxda.
“Wajiga” mashruuca dhismaha waa qandaraaslaha guud. Waxay mas'uul ka yihiin shaqaalaysiinta qandaraaslayaal hoosaad, soo saarista qorshayaasha kharashka, kormeerka jadwalka shaqada, iyo dhammaystirka mashruuca waqtigii loogu talagalay iyo miisaaniyadda.
In kasta oo qaar ka mid ah qandaraasleyda guud ay u shaqeeyaan shirkado dhisme oo waaweyn, inta ugu badan ayaa iskood u shaqeysta. Dakhliga lixda ah ayaa ku badan 20% ugu sarreeya la-taliyayaasha guud.
Qandaraasleyda guud waxay filan karaan in lagu bixiyo heerka ugu sarreeya ama u dhow marka ay timaaddo qandaraaska mushaharka. Waxaad qaadataa halis iyo masuuliyad ka badan sida wejiga mashruuca dhismaha marka loo eego xirfadlayaal kale oo badan. Iyo, nasiib wanaag, waxaa laguu soo celinayaa dadaalkii aad samaysay.
Mushaharka qandaraasyada celcelis ahaan way adag tahay in la helo, laakiin xitaa marka aad bilowdo, waxaad filan kartaa inaad samayso ugu yaraan $ 44,000. GC ahaan, waxaad filan kartaa inaad kasbato wax badan marka aad hesho khibrad.
Markaad adigu is -dhisto, ilo sumcad leh ayaa qiyaasaya in celceliska dakhliga guud ee qandaraasku u dhexeeyo $ 70,000 ilaa $ 95,000+.
Waa Noocee Qandaraaslayaashu Lacagta Ugu Badan Sameeyaan?
Ku shaqaynta qandaraasle waxay horseedi kartaa guul dhaqaale, laakiin sidoo kale waa fikrad wanaagsan in la raadiyo shaqada dhismaha ee ugu mushaharka badan. Tani waa lagama maarmaan si loo helo waxyaabaha wanaagsan.
Markay timaaddo helitaanka xirfadda ugu fiican, mushaharku had iyo jeer waa diiradda sare. Sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha Mareykanka, waa kuwan tobanka Qandaraasle/Shaqooyinka dhismaha ee ugu mushaarka badan si aad uga fikirto raadintaada shaqo.
Qandaraaslayaasha/Shaqada Dhismaha ee ugu mushaarka badan
1. Kormeeraha Guud ee Dhismaha (Mushaharka celceliska: $ 85.3 saacaddii)
Kormeerayaasha guud ayaa mas'uul ka ah kormeerka qayb kasta oo ka mid ah mashruuca dhismaha. Injineerada, waratada, qandaraaslayaasha, qandaraaslayaasha hoose, iyo la taliyayaasha ayaa shaqaaleeya oo maamula.
Waa mas'uuliyadda kormeeraha dhismaha si loo dammaanad qaado in dhammaan mashaariicdu u hoggaansamaan caafimaadka, amniga, iyo xeerarka deegaanka.
Shaqada Kormeeraha ayaa sidoo kale ku lug leh in mashaariicda lagu hayo miisaaniyadda iyo jadwalka.
Kormeerayaasha ayaa fuliya xakamaynta tayada marka shaqada la dhammeeyo waxayna amraan wixii hawlo dheeraad ah ee looga baahan yahay dhammaystirka mashruuca.
2. Injineerka madaniga ah (Mushaharka celceliska: $ 36.6 saacaddii)
Shahaadada bachelor -ka ayaa looga baahan yahay inay u shaqeyso sidii injineer madani ah, halka qaar badan ay sidoo kale haystaan ​​shahaadada mastarka.
Wadooyinka, garoomada diyaaradaha, buundooyinka, dekedaha, xarumaha korontada, dhismayaasha guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay, iyo mashaariicda kale dhamaantood waxaa nashqadeeyay oo kormeeraya injineerada madaniga ah.
Waa mas'uuliyadda injineer madani ah si loo hubiyo in mashaariicdu u hoggaansamaan xeerarka deegaanka, caafimaadka, iyo badbaadada.
3. Maareeyaha dhismaha (Mushaharka celceliska: $ 36 saacaddii)
Dhinacyada badan ee mashruuca waxaa qorsheeyey, naqshadeeyey, oo isku soo ururiyey maareeyayaasha dhismaha. Waxay hubiyaan in mashruuc kasta loo dhammaystiro si waafaqsan tilmaamaha.
Maareeyayaashu waxay sidoo kale u qoondeeyaan shaqooyinka shaqaalaha kale sida korontoyaqaannada, tubooyinka, iyo shaqaalaha guud, waxayna kormeeraan waxqabadkooda. Inta badan loo shaqeeyayaasha waxay u baahan yihiin shahaadada koowaad ee jaamacadda maamulayaasha dhismaha.
4. Kuleeliyaha (Mushaharka celceliska: $ 31.59 saacaddii)
Mashruucyada cusub ee dhismaha, kuleeliyayaashu waxay dejiyeen kuleyliyaha uumiga iyo guryaha kuleyliyaha. Ka dib marka dhismuhu dhammaado, waxaa laga yaabaa inay mas'uul ka yihiin nadiifinta iyo dayactirka nidaamka kuleeliyaha.
Qalinjabinta dugsiga sare ama GED, iyo sidoo kale dhammaystirka barnaamijka tababarka barasho, ayaa laga rabaa inay u shaqeeyaan sidii kuleeliyaha.
5. Pipefitter ( Celceliska mushaharka: $26.71 saacadii)
Biibiileyaasha ayaa ka shaqeeya kulaylinta, qaboojinta, iyo nidaamyada biyaha mashruuca dhismaha, naqshadaynta, isu -ururinta, iyo rakibidda nidaamyada tuubooyinka.
Pipefitters sidoo kale alxanka, naxaasta, alxanka, iyo sibidhka si habboon loogu rakibay tuubooyinka si loo dammaanad qaado in tuubooyinka qaab-dhismeedka.
Qalinjabinta dugsiga sare ama wax u dhigma, waxaad ku shaqayn kartaa sidii tuubbooye duruufaha badankood.
XIDHIIDHKA: 10ka Sawir -qaade ee ugu mushaarka badan 2022
6. Injineerka Dhismaha (Mushaharka celceliska: $ 25.71 saacaddii)
Mid ka mid ah shaqooyinka ugu fiican ee dhismaha waa injineer dhisme. Injineerada dhismuhu waa inay joogteeyaan dhismaha iyo dayactirka qaybaha dhismaha, korontada, iyo farsamada ee mashruuca dhismaha.
Waxay sidoo kale baadhaan miisaaniyada, iyo macluumaadka kale si ay u hubiyaan in shaqadoodu raacdo tilmaamaha mashruuca.
Markii la dhammeeyo, injineerada dhismuhu waxay inta badan joogaan goobta si ay u maareeyaan dayactirka iyo dayactirka ka-hortagga. Injineero dhisme oo heer-sare ah ayaa looga baahan yahay shahaado jaamacadeed oo laba sano ah, iyo shahaadada bachelorka ama mastarka ayaa looga baahan yahay injineerada dhismaha ee horumarsan.
7. Koronto -yaqaan (Mushaharka celceliska: $ 25.26 saacaddii)
Mashruucyada dhismaha, koronto -yaqaannada waxay naqshadeeyaan, rakibaan oo dayactiraan nidaamyada siligga. Waxay hubiyaan in nalalka iftiinka, jebiyayaasha wareegga, iyo hababka kontoroolka korontada dhammaantood lagu meeleeyo tilmaamahooda.
Inta badan shaqaalaha korontada ayaa si fudud ugu baahan dibloomada dugsiga sare ama GED, inkasta oo aad u baahan doonto inaad si rasmi ah shahaado uga hesho meelo badan.
8. Tubiyaasha ( Celceliska mushaharka: $25.07 saacaddii)
Khubaradu waxay khariidadiyaan oo ku rakibaan tuubooyin mashaariicda dhismaha iyagoo adeegsanaya naqshado. Tubaalayaasha ayaa sidoo kale mas'uul ka ah aaladaha dheecaanka, musqulaha, saxanka, iyo dhuumaha hawada, biyaha, iyo dareerayaasha kale.
Dibloomada dugsiga sare ayaa ku filan inay u shaqayso tuubiste, laakiin gobolada intooda badan waxay u baahan yihiin shahaado xirfadeed.
9. Kormeeraha dhismaha (Mushaharka celceliska: $ 23.97 saacaddii)
Kormeerayaasha dhismuhu waa khabiirada kormeeraya fulinta mashaariicda dhismaha.
Tani waa si loo dammaanad qaado inay u hoggaansamaan xeerarka dawladda, xeerarka maxalliga ah, iyo shuruudaha qandaraaslaha.
Kormeeraha dhismaha shaqadiisu waa inuu oggolaado qorshayaasha u hoggaansan heerarka iyo, haddii loo baahdo, wuxuu soo saaraa amarrada shaqada joojinta si dhismayaasha loo waafajiyo.
Shaqadani waxay ku lug leedahay kormeerida dhammaan dhinacyada dhismaha, oo ay ku jiraan qaab -dhismeedka, tuubooyinka, iyo hababka korontada.
Dibloomada dugsiga sare ama GED ayaa ku filan inuu u shaqeeyo kormeeraha dhismaha, hase yeeshee, meheradaha qaarkood waxay doorbidaan dibloomada kulliyadda.
10. Shaqaalaha birta (Mushaharka celceliska: $ 20.09 saacaddii)
Loo -shaqeeyayaasha badankoodu waxay kaliya u baahan yihiin shahaadada dugsiga sare ama wax u dhigma, iyo sidoo kale shahaado -xirfadeed, si ay ugu shaqeeyaan bir -ka -shaqeeye.
Shaqaalaha birta ayaa birta ka dhiga tiirar, guntiyo, alwaaxyo, iyo qaybaha kale ee dhismaha iyaga oo jarjaraya, alxanaya, shiidinaya, oo qaabaynaya. Waxay gacan ka geystaan ​​dhisidda dhismayaal, buundooyin, iyo dhismayaal kale. Shakhsiyaadka ku jira booskan waxay sidoo kale la shaqeeyaan hawl-wadeennada qalabka culus si ay u qaadaan alaabta la dhammeeyey ee goobta habboon ee goobta dhismaha.
Wadamada Ugu Mushaharka Qandaraaslaha Ugu Sareeya Adduunka
Shaqada qandaraasleyaashu waa waddo shaqo oo macquul ah oo bixisa rajooyin badan oo horumar iyo mushahar tartan ah.
Qandaraaslayaashu waxay kasban karaan dakhli badan dalal kala duwan. Waa kuwan dhowr ka mid ah waddamada ugu wanaagsan adduunka:
1. Switzerland: (Celcelis ahaan mushaharka sanadlaha ah: $ 77, 438)
Iswiiska dhexdiisa, celceliska mushaharka shaqaalaha dhismaha waa $ 77,438 sanadkii. Switzerland ayaa si joogto ah ugu jirta kaalinta koowaad ee dalalka ugu farxadda badan adduunka.
Kaliya maahan dhaqaale kobcaya oo sii kordhaya, laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan meeraha, oo leh dooxooyin cagaaran oo cagaar leh iyo buuro yaab leh.
Akhri: 25ka ugu Sarreeya ee Shabakadaha Lacagta Ugu Badan Bixiya 2022 | Shirkadaha Ugu Fiican
2. Denmark: (Celcelis ahaan mushahar sanadeedka $ 71,565)
Tani waa mid ka mid ah gobolada ugu wanaagsan shaqooyinka dhismaha. Denmark waa boqortooyo magaalooyin firfircoon iyo muuqaallo qurux badan, iyo sidoo kale bulsho hal -abuur leh hab -nololeed waara.
Denmark waxay ku naaloonaysaa heerka ugu sarreeya ee nolosha adduunka.
3. Norway: (Celcelis ahaan mushahar sanadeedka: $ 67,154)
Qeybta dhismaha iyo dhismaha waa warshadaha ugu muhiimsan Norway.
Dhismaha iyo dayactirka dhismayaasha guryaha iyo ganacsiga, iyo sidoo kale horumarinta waddooyinka, garoomada diyaaradaha, iyo tas-hiilaadka la xiriira difaaca, tamarta, saliidda, gaaska, tareenada, iyo taraamka, waxay ku dhacaan dhismaha iyo warshadaha dhismaha.
4. Maraykanka (Celceliska mushaharka sanadlaha ah: $ 62, 019)
California, New Jersey, Delaware, Massachusetts, Sacramento, Atlanta, iyo Alaska ayaa ka mid ah dawladaha ugu mushaharka badan Maraykanka qaar ka mid ah qandaraaslayaasha. Dalka Mareykanka, ku dhawaad ​​110 000 oo naqshadeeye ayaa shaqeeya. Magdhawga sanadlaha ah ee naqshadeeyaha ee dalka waa $ 80 490.
5. Australia (Celcelis ahaan mushahar sanadle ah: $ 54,155)
Qandaraaslayaasha dhismaha ee Australia waxay leeyihiin rajooyin shaqo oo badan. Waa dal horumaray oo leh mushahar fiican iyo nolol sare.
Ajnabi ahaan, waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad fahamto luuqadda Ingiriisiga, taas oo kuu oggolaan doonta inaad si fudud ugu dhex socoto magaalada. Aqoonsiyada dhismaha ee waaweyn ee dalalka kale laguma aqoonsado Australia.
Sidaas darteed, shahaado kasta oo laga helo meel ka baxsan Australia waa in la barbar dhigaa shahaadooyinka Australia.
Akhri: 10 -ka Tababare Shakhsiyeed ee Ugu Lacagta Badan Adduunka | 2022
6. Kanada ( Celceliska mushaharka sanadlaha: $47,262)
Kanada, hadda waxaa ka maqan shaqaale tababaran oo ka shaqeeya warshadaha gaarka ah sida dhismaha. Taasi waxay keentay in waddanku bilaabay mashaariic dhowr ah oo loogu talagalay in la keeno gacmo badan oo dalal kala duwan si ay u buuxiyaan boosaska furan ee shaqaale kala duwan.
XIDHIIDHKA: Intee in le'eg ayay Chefyadu sameeyaan| Dakhliga ugu fiican
Dhaqaalaha Kanada waa mid ka mid ah adduunka ugu xasilloon, oo leh heer nololeed oo sarreeya. Xirfadlayaasha ganacsiga dhismaha ee hammiga u leh inay yimaadaan Kanada waxay la kulmi doonaan horumar shaqo iyo nolol tayo sare leh haddii ay yeeshaan sifooyinkan.
Kororka la filayo ee dhismaha Kanada ayaa la filayaa inuu kor u qaado baahida loo qabo dhismayaasha.
7. Jarmalka: (Celcelis ahaan mushahar sanadle ah: $ 44,803)
Dalka Jarmalka, shaqaale ka shaqeeya dhismaha, dhismaha, ama rakibidda wuxuu qaataa celcelis ahaan $ 32606. Miisaanka mushaharku waa $ 1,128.91 ilaa $ 7667. Kani waa mushaharka celceliska bishii, oo ay ku jiraan hoy, gaadiid, iyo faa'iidooyin kale.
8. France: (Celcelis ahaan mushahar sanadeedka: $ 42,2117)
Faransiiska dhexdiisa, celceliska shaqaalaha wuxuu sameeyaa qiyaastii $ 42,2117 sanad walba. Inta badan jagooyinka Faransiiska, dakhligani wuxuu ku jiri lahaa faa'iidooyin shaqo oo dheeraad ah.
9. Boqortooyada Ingiriiska: (Celcelis ahaan mushahar sanadle ah: $ 40,692)
Celceliska magdhowga guud ee sanadlaha ah ee Shaqaalaha Dhismaha waa $39,1505.22 ($14.25 saacaddii), taas oo $1798.29 (-4%) ka yar celceliska mushaharka qaranka ee Boqortooyada Midowday. Celceliska dakhliga bilowga ah ee Shaqaalaha Dhismaha waa $27112.68. Shaqaalaha ugu mushaharka badan waxay heli karaan ilaa $62,248.50 sanadkii.
10. Netherlands: (Celcelis ahaan mushahar sanadeedka: $ 40,612)
2017, Nederlaan, oo inta badan loo yaqaan Holland, ayaa loo doortay waddanka ugu farxadda badan adduunka. Dalkani wuxuu bixiyaa waxbarasho dadweyne oo heer sare ah, kaabayaal, iyo caymis caafimaad oo loogu talagalay dhammaan muwaadiniinta. Ka shaqaynta qandaraasle ahaan halkan waa mid faa'iido leh sababtoo ah koritaankooda degdega ah.
Waa kuwee qandaraaslayaasha ugu mushaharka badan?
Rakibayaasha wiishka iyo dayactirayaasha ($ 84,990)…
Kuleeliyaha ($ 63,100)…
Kormeeraha dhismaha iyo dhismaha ($ 60,710)…
Koronto -yaqaan ($ 56,180)…
Tuubbooyinka, tuubboolayaasha iyo kuwa uumiga sameeya ($ 55,160)…
Shaqaalaha birta ($ 53,650)…
Shaqaalaha biraha waraaqaha ($ 50,400)…
Nijaarrada ($ 48,330)
2. Waddankee ugu kharashka badan dhismaha?
Waddanka ugu mushaharka badan shaqaalaha dhismaha waa Maraykanka, oo celcelis ahaan mushaarkiisu yahay $ 69,300 (£ 53k). Shaqaalaha dhismaha ee Maraykanka ayaa ah kuwa ugu mushaharka badan adduunka, iyada oo dhismayaasha magaalada New York ay helaan lacagta ugu badan.
3. Qandaraasle ahaan ma u qalantaa?
Faa'iidooyinka ka shaqeynta qandaraasle ayaa laga yaabaa inay ka badan yihiin dhibaatooyinka, laakiin waa inaad aqbashaa xaqiiqda inaysan ahayn mid fudud sida inaad maalin walba timaaddo shaqada oo aad sugto lacagta soo gasha.
4. Intee in leeg ayuu sameeyaa shaqaalaha dhismaha?
Shaqaalaha dhismaha waxay kasbadaan celcelis ahaan $ 2,816 bishii, taas oo ah $ 65 (2%) in ka badan celceliska qaranka ee $ 2,751 bishii.
5. Inaad noqoto qandaraasle ma tahay xirfad wanaagsan?
Marka la barbardhigo shaqada joogtada ah, shaqooyinka qandaraaska badanaa waxay bixiyaan 30-40 boqolkiiba magdhow guud. Heerka kororku wuxuu ku kala duwan yahay warshadaha. Si kastaba ha noqotee, waa inaad aad uga taxaddartaa is -dhexgalkaaga shirkadaha aad doorato inaad la shaqeyso qandaraasle ahaan.
6. Sideen u noqon karaa qandaraasle?
Waa kuwan tillaabooyinka lagu noqdo qandaraasle wanaagsan:
Samee xoogaa tababar….
Ka fikir inaad sii wadato waxbarashada sare…
Raadi tababar ku saabsan shaqada.
Eeg shuruudaha looga baahan yahay helitaanka shatiga….
U hoggaansamaan dhammaan caymiska iyo shuruudaha ruqsadda.
Sii wad barashada.
7. Waa maxay sababta qandaraasleyaasha loo siiyo mushahar dheeraad ah?
Qandaraaslayaasha waxa la siiyaa mushaharka ugu badan maadaama ay wax badan ka qaadaan oo ay haysan karaan qayb ka badan magdhowga shaqaalaha. Qandaraaslayaashu waxay leeyihiin saddex faa'iidooyin oo muhiim ah shaqaalaha: waxay qaadi karaan wax badan, waxay bixin karaan canshuur yar, iyo inay dhimaan kharashaadkooda.
Ka shaqaynta warshadaha dhismuhu waxay noqon kartaa shaqo madadaalo leh oo lagu qanco. Shaqadaadu waxay gacan ka geysataa qaar ka mid ah dhismayaasha bulshada ugu muhiimsan uguna qiimaha badan qaybtan. Waxaa jira shaqooyin dhisme oo dhowr ah oo ay heli karaan dadka leh heer kasta oo xirfadeed.
Shaqada qandaraaslayaashu waa mid faa'ido badan leh, laakiin sidoo kale waxaa jira shaqooyin dhisme oo qaali ah.
Sababtoo ah yaraanta shaqaale tababaran iyo horumarka tignoolajiyada-qiimaynta, warshadaha dhismaha, oo u badan qaybta la deggan yahay, ayaa la filayaa inay koraan ilaa $110 bilyan marka la gaaro 2025.
Tani waxay soo jeedinaysaa in u shaqaynta qandaraaslaha ay hadda faa'iido leedahay oo ay sii ahaan doonto mid faa'iido leh mustaqbalka
13 Qof Ee Ugu Mushaharka Badan Dunida | Faallooyinka ugu Fiican
20 Horumariyaha Shabakadda Lacagta Ugu Badan Bixiyay | Dalalka Ugu Fiican
Beddelka ugu Fiican ee Amaahda Shakhsiyeed ee Chase Bank
25 Qaataha Ugu Lacag Badan Ee NFL
15 Badbaadada Lacagta Ugu Sarreysa Ee NFL | Gobolka ugu Fiican
Xilligii dembiga fidinta, booska badbaadada waa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan…
15 Shaqooyinka Habeenkii Ugu Fiican Oo Bixiya In ka Badan $ 50/Maalin 2022
Lacag la'aan si aad ugu noolaato raaxo waxay noqon kartaa mid aad u niyadjabsan. Ka sokow shaqadaada caadiga ah, waxaad u badan tahay inaad rabto…
20 Shaqooyinka Labaad ee Macalimiinta Sanadka 2022: Hustle Side for Macalimiinta
Xiisadaha dhinaca ama waxa aan u tixraacno sida shaqooyinka labaad ee macallimiinta kama saaraan iyaga…
25 Shaqaalaha Ururka Shaqaalaha Ugu Mushaarka Badan 2022
Weligaa ma maqashay shaqaalaha ururka iyo ururka shaqaalaha? Haa, ma ogtahay wada-hadallada aan dhamaadka lahayn ee u dhexeeya kooxaha qaar…